Huawei Mate X2: nanambara ny daty ofisialy ofisialy ary tafaporitsaka | Androidsis
Efa misy daty famotsorana ofisialy ny Huawei Mate X2, ny finday avo lenta manaraka an'ny mpamokatra sinoa, ary ity dia mifanitsy amin'ny 22 ho an'ny Febroary, andro iray izay, amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity, dia latsaky ny telo herinandro miala, noho izany dia kely sisa no hahalala azy tanteraka.
Na izany aza, alohan'ny hahatongavan'io daty io dia efa fantatsika ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka azy manokana sy ny famaritana ara-teknika an'ity terminal ity, na izany aza, fantatsika izay azontsika antenaina amin'izany, satria izay misy hatreto dia izay efa navoaka tamin'ny volana lasa, ary avy eo holazainay aminao izany.
Ny Huawei Mate X2 dia ho finday mandroso sy lafo
Tsy afaka manantena kely amin'ny Huawei Mate X2 isika. Amin'ity fitaovana ity dia hahazo ny tsara indrindra isika, izay hisy fiatraikany ratsy amin'ny vidiny, ary hoy izahay "ratsy" satria manodidina ny 2.000-2.500 Euros eo am-pivoahana ity fiantohana ity, raha miantehitra amin'ny zavatra hitantsika tamin'ny Mate X.
Ity smartphone ity dia voalaza fa manasongadina efijery iray misy diagonal 8.01 santimetatra ary vahaolana FullHD + 2,480 2,220 x XNUMX teboka. Ny eo alohan'ity, etsy ankilany, dia hanana tontonana 6.45-inch, ary misy vahaolana ihany koa FullHD +, fa 2,270 x 1,160 teboka.
Ny sehatra finday hanombohana ny Mate X2 dia mety ilay Kirin 9000 5nm, chipset processeur mandroso indrindra an'ny marika izay afaka miasa amin'ny famantaranandro 3.13 GHz farafahakeliny noho ny iray amin'ireo fotony valo.
Ny fakan-tsary eo alohan'ilay fitaovana dia voatonona ho 16 MP, raha ny rafitra fakantsary efatra kosa, izay hanana 50 MP main, lens 16 MP ho an'ny sary zoro malalaka, famoahana shutter 12 MP ary sensor ho an'ny 8 MP, mety ho hita eo aorian'ny Mate X2. Ho fanampin'izany, ny batterie dia mety hanana 4.400 mAh miaraka amina fiampangana haingana 65 W. Ho hitantsika raha mifanaraka amin'ny toetra sy ny famaritana farany amin'ny telefaona amin'ny fotoana fanombohany ofisialy ireo rehetra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Smartphone finday Huawei Mate X2 azo ovaina hanomboka amin'ny 22 Febroary: ity no fantatsika hatreto
Samsung Galaxy M02 dia finday lafo vidy miaraka amin'ny bateria 5.000 mAh